Mareykanka oo shaaciyay cadeyn muujinaysa xiriir ka dhaxeeyay Pompeo-Giuliani | Xaysimo
Home War Mareykanka oo shaaciyay cadeyn muujinaysa xiriir ka dhaxeeyay Pompeo-Giuliani
Mareykanka oo shaaciyay cadeyn muujinaysa xiriir ka dhaxeeyay Pompeo-Giuliani
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee waddanka Mareykanka, ayaa waxa ay shaacisay diwaanno la xiriira qaarka uu maamulka Trump ula dhaqmay Ukraine.
Dikumintiyada ayaa waxaa la gaarsiiyay hay’adda dhanka anshaxa kala socota dowladda Mareykanka kaddib markii la codsaday in iyadoo xorriyadda xogta la adeegsanayo dikumintiyadaas la bixiyo.
Diiwaannada ayaa waxa ay muujinayaan xiriir joogta ah oo u dhaxeeya Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo iyo qareenka Mr Trump ee shakhsiga Rudy Giuliani.
Xiriirka Mareykanka iyo Ukraine ayaa waxa uu udug dhexaad u yahay baaritaanka xil ka qaadista Mr Trump.
Emaillada ku jira dikumintiyada ayaa waxa ay muujinayaan in labada nin ay taleefanka ku wadahadleen 27 iyo 29 Maarso.
Wicitaanka labaad ayaa yimid kaddib markii mid ka mid ah shaqaalaha Giuliani uu email u diray kaaliyaha Madaxweyne Trump, Madeleine Westerhout, si uu u waydiiyo inay hayso taleefanka Mr Pompeo.
Qareenka gaarka ah ee Trump, Rudy Giuliani oo la sawiray isagoo taleefan ku hadlaya
Maxaa lagu eedeeyay Madaxweyne Trump?